Kutheni le nto ii-infographics zisenza izixhobo ezikhulu zokuthengisa | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 11, 2012 Lwesine, Okthobha 11, 2012 Douglas Karr
Njengoko i-infographics iya ithandwa ngakumbi, bakwakha itoni yokugxeka kumgangatho wabo kunye nokuchaneka. Ndiyayithanda i-infographics kuba ibonelela ngendawo ebonakalayo yokuchaza ulwazi. Nokuba ulwazi luyinyani okanye akunjalo lelinye ibali… kwaye ukungaphandi kakuhle kwe-infographic kunokutsala iitoni zokugxekwa kunye nokwenzakalisa igama lenkampani eliqhubayo. Konke kufanelekile kuthando kunye ne-infographics. 🙂
Amehlo lulwandiso lobuchopho kwaye ngaphezulu kwesiqingatha sabantu ngabafundi ababonwayo. Ngale nto engqondweni, abapapashi kunye namashishini banokuxhamla kolu tshintsho. Kukho imfuno yedatha enokuthi ikhawuleze idluliswe, inamathele kwaye ibonakale inomdla.
Le infographic, Kutheni le nto ii-infographics zenza izixhobo zokuThengisa eziNkulu evela kubayili be-infographic base-UK uNeo Mammalian Studios, ubetha kuzo zonke iisilinda ezichanekileyo kwinto eyenza ukuba infographics isebenze… indlela ebonakalayo yokusasaza idatha, ibango elikhulayo kubaphulaphuli bakho, kunye nendawo elula ukwabelana ngayo! Yeyona trifecta yentengiso yomxholo. Funda ngakumbi ngendlela yokwenza Sebenzisa kwaye uphakamise infographics yakho.
tags: kwi-infographicintengiso ye-infographicAmanani entengisoIzitudiyo ze-neo mammalian
Ulawulo lweshishini kumajelo eendaba kwi-Syncapse
Oktobha 11, 2012 ngo-8: 09 PM
Kwaye ii-infographics zenza imifanekiso egqwesileyo eya kutsala abafundi ngakumbi mna. Ngokujonga kwimifanekiso, ndiyayiqonda into efunwa kukubonisa infographic.
Okt 12, 2012 ngexesha 2:23 AM
Undikhumbuza ngento endiyivileyo kumhleli wephephandaba kudala: Ukuba infographics izakudlala indima enkulu kumaphephandaba entengiso. Kuyacaca ukuba iyinyani nakwinto ebizwa ngokuba yimithombo yeendaba emitsha, nayo.